Kenya oo Dalbatay in khilaafka xuduudda badda lagu dhameeyo wadahadal. | Dalka Times - News and Politics
Home WARKA Kenya oo Dalbatay in khilaafka xuduudda badda lagu dhameeyo wadahadal.
Kenya oo Dalbatay in khilaafka xuduudda badda lagu dhameeyo wadahadal.
Kenya ayaa dooneysaa in dacwadda muranka badda ee kala dhexeysa Soomaaliya lagu xalliyo wadahadal isla markaana kiiska la gala noqdo maxkamadda caddaalladda adduunka, sida lagu sheegay warqad kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya.
“Kenya waxay gaartay go’aanka ah in aanay ka qeybgelin dhageysiga dacwadda isla markaana waxay ku aamin qabtaa in kiiska la gala noqdo maxkamadda si loogu xalliyo qaab wadaxaajood ah” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay wasaaradda arrimaha.
Dowladda Kenya ayaa dhawaan isaga baxday dacwadda badda, waxay ku eedeysay maxkamadda inaysan dhexdhexaad ka ahayn dacwaddan oo khuseysa aag badeedka lagu mursan yahay oo dhan 62,000 mayl oo laba jibaaran oo badweynta Hindiya ah. Waxaa la aaminsan yahay nay ceegaagaan gaas iyo saliidd.